အသစ်ထုတ်ထားသော Xiaomi Mi Mix 2S ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များက Snapdragon 845 နှင့် 8GB RAM ဖြင့်လာမည်ကိုအတည်ပြုသည်။ Androidsis
Xiaomi Mi Mix 2S ၏အသစ်ပေါက်ကြားခဲ့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ Snapdragon 845 နှင့် 8GB RAM တို့ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
Xiaomi Mi Mix 2S နှင့်တရားဝင်မိတ်ဆက်ခြင်းမပြုမီစကားပြောရန်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးသောဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုရှိသည် မိုင် 7ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမအကြိမ်အကြောင်းကိုသာပြောမည်ဖြစ်သော်လည်း၊ မကြာသေးမီကဒီမိုဘိုင်းနှင့်အတူပါလိမ့်မယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအချို့ပေါက်ကြားပါပြီ.
ကျနော်တို့ခေါင်းစဉ်မှာထောက်ပြအဖြစ်နှင့်ရက်ပေါင်းများစွာမိမိတို့ကိုယ်ကိုလူသိများလာကြပြီအများအပြားကောလာဟလများပြုမိသကဲ့သို့, Mi Mix 2S တွင် Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာနှင့်ပါလာမည် - အမေရိကန်ချစ်ပ်ထုတ်လုပ်သူနှင့် ၈ ဂစ်ဂါဘိုက် RAM မှနောက်ဆုံးထုတ်။ ရှာတွေ့သည်!
စပိန်ဘာစီလိုနာမြို့၌ကျင်းပမည့် Mobile World Congress (MWC) နှင့် ၃ ပတ်မပြည့်မီတွင် Xiaomi Mi Mix 2S ဟာစကားပြောလို့မရပါဘူး ဒီအရေးကြီးတဲ့နည်းပညာပြပွဲမှာသတင်းထုတ်ပြန်နိုင်တယ်လို့ကောလာဟလတွေထွက်ပေါ်နေပြီးသတင်းစာတွေနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာမီဒီယာတွေရဲ့မျက်လုံးတွေဟာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
Xiaomi Mi Mix 2S ပေါက်ကြားမှုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
ကျနော်တို့ပေါက်ကြားအစီအစဉ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Xiaomi Mi Mix 2S တွင် octa-core Qualcomm Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာ (4GHz 75x Cortex-A2.8 + 4GHz တွင် 55x Cortex A-1.8) ဖြင့်ထုတ်လုပ်မည်၎င်းသည် 8GB RAM memory နှင့်၎င်းသည်ပေါင်းစပ်လိုက်သော 3.0 screen အပြည့်လက်ဗွေဖတ်စက်တစ်ခုနှင့်အတူလာလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏နိမ့်ဆုံးဖော်ပြချက်အထိအလွန်အမင်းလျှော့ချထားသော frames များပါလာလိမ့်မည်ကိုလည်းဖော်ပြသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အနောက်ဘက်တွင် 12MP dual-camera ပါဝင်သည်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ၊ 256GB UFS အတွင်းမှတ်ဉာဏ်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုမြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုအတွက် 4G LTE တီးဝိုင်းအားလုံးတို့၏ကွေးကောက်ကြွေထည်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
အထူးသ ၎င်းသည် Mi Mix 2S နှင့်ပါ ၀ င်မည့်အင်္ဂါရပ်များကိုအတည်မပြုနိုင်ပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ Xiaomi ကိုတရားဝင်အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်နေရပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » Xiaomi Mi Mix 2S ၏အသစ်ပေါက်ကြားခဲ့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ Snapdragon 845 နှင့် 8GB RAM တို့ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
Android Auto သည် Clarion, Karma Automotive, Boss Audio အဖွဲ့များသို့လာလိမ့်မည်
Android အတွက်အကောင်းဆုံး animoji အက်ပလီကေးရှင်းများ